Category: Torohevitra toro-lalana amin'ny fiara
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny fiara
Ny mampientam-po ampahany nandeha any ivelany no unpredictability ny traikefa. Rehefa mandeha any an-tany hafa, dia ho hita amin'ny kolontsaina samy hafa, Fikirana, sy ny zavatra niainany. Na dia manao fikarohana, you are sure to be taken by surprise by some…
Winter no fotoana tsara indrindra mba hanorenana firefodrefotry afo, soa aman-tsara namely ny tehezan-tendrombohitra, hanorina snowmen ary snuggle miaraka mahafinaritra dite. Indrisy, fa tsy izay mahafinaritra sy lalao. Winter ihany koa ny mamorona ny sasany amin'ireo lalana mamitaka indrindra ny toe-piainana. Because it’s not possible…